News - သွေးအောက်စီဂျင်စစ်ဆေးရန်ကိရိယာများအတွက် Oximeter
COVID-19 ကူးစက်ခံရသည့်လူနာများတွင်အဖြစ်များသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ“ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏလျော့နည်းသွားသည်။ ” အရေးပါသောလက္ခဏာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုထင်ဟပ်စေသောအရေးကြီးသောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Xinhua Sports သည်ယခင်ကသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးလူသိများသောသိပ္ပံဆောင်းပါးဖြစ်သော“ သွေးထဲတွင်အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ ” ကျွမ်းကျင်သူများပြောတာကိုနားထောင်ပါ။
ပထမဆုံးရှင်းပြဖို့လိုတာကဘာလို့ smart wearable devices ကိုရွေးချယ်တာလဲ အသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲ detectဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအစား ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်သွေးအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများစွာရှိသည်။
1. ထိုကဲ့သို့သောတောင်တက်အဖြစ်ပြင်ပတွင်အားကစားအတွက်စေ့စပ်သောအခါ။ အမြင့်သည်မြင့်လေ၊ လေလေလေလေလေ၊ လူ့သွေးအောက်စီဂျင်ပမာဏနိမ့်လေလေဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအမြင့်ဒေသများရှိပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတွင်သင်ပါ ၀ င်သည့်အခါ၊ အောက်ဆီဂျင်ပြည့်နှက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
၂။ သောက်ခြင်း။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသောအရက်တိုင်းအတွက်အောက်စီဂျင်သုံးခုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် hypoxia သည်ယစ်မူးခြင်း၏ထင်ရှားပြသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ရေရှည်အရက်သမားများသည်အရက်နှင့် hypoxia အပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်၊ ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်အရက်မူးသောအခါ၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။ ထိုသို့သောသူတို့သည်သောက်နေစဉ်သွေးအောက်စီဂျင်ပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် ပို၍ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
3. မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဦး နှောက်၏အောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်စီဂျင်ပမာဏ၏ ၂၀% ရှိသည်။ မြင့်မားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွင် ဦး နှောက်၏အောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုသည်မလွှဲမရှောင်သာတိုးပွားလိမ့်မည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အောက်စီဂျင်ပမာဏ နည်း၍ စားသုံးပါကအလွန်အကျွံစားသုံးပါကအနည်းငယ်စားသုံးပါကမူးဝြေခင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသာမက ဦး နှောက်ကိုပါပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်လေ့လာမှုပြုခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏သွေးတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏမြင့်တက်မှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်များမှလူများသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားများတွင်ပါဝင်ခြင်းများ၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်“ အဆင်ပြေခြင်း” နှင့်“ ချက်ချင်း” လိုအပ်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အားကစားလက်ကောက်ကဲ့သို့သောစမတ်ကျသောဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများသည်အချက်အလက်တိကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများထက်အနည်းငယ်နိမ့်သော်လည်း၎င်းတို့သည်“ တက်ကြွသောခြေရာခံခြင်း” နှင့်“ အချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်ချက်” တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သူတို့သည်အားကစားဝါသနာရှင်များအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။
ဒီတော့ဘာသဘောတရားလဲ စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာ အသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲ detect လုပ်ဖို့အသုံးပြု?
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက်လိုအပ်သောအောက်စီဂျင်သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်မှဝင်ရောက်လာသည်။ သွေးနီဥအတွင်းရှိဟီမိုဂလိုဗင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြန်ပေးသည့်ဟေမိုဂလိုဘင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်သျှူးဆဲလ်များသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သွေးဟေမိုဂလိုဘင်သည်သွေးတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုတိကျစွာရှာဖွေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဟီမိုဂလိုဘင်တွင်ပါရှိသောအောက်စီဂျင်ပမာဏသည်သွေးနီဥနှင့်အနီရောင်အလင်းတို့၏စုပ်ယူမှုကိုသက်ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့်အောက်စီဂျင်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောဟီမိုဂလိုဗင်သည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်မပါသောဟီမိုဂလိုဗင်သည်အနီရောင်အလင်းကိုစုပ်ယူသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများစမတ်လက်ကောက်သို့မဟုတ်နာရီများကဲ့သို့သောသွေးကြောသွေးအတွင်းစုပ်ယူလိုက်သောအလင်းပမာဏသည်သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းကွဲပြားမှုရှိသည်ဟူသောနိယာမကို အခြေခံ၍ optical တိုင်းတာခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် photoelectric sensors ကိုအသုံးပြုသည်။ အားကစားနာရီများတွင်အလင်းရောင်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းရောင်အသီးသီးထုတ်လွှတ်ရန်တောက်ပသောပြွန်နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်အနီရောင်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုသွေးလွှတ်ကြောများမှတစ်ဆင့်အချက်အလက်အချက်အလက်များရရှိစေရန်လျှပ်စစ်အချက်ပြသို့ပြောင်းလဲရန် photodetector ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နောက်ခံ algorithm ကို အသုံးပြု၍ အားကစားနာရီသည်သုံးစွဲသူ၏သွေးအောက်စီဂျင်ပမာဏ၏ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးလွှတ်ကြောသွေး၏အောက်စီဂျင်ပြည့်နှက်ခြင်းကိုပုံမှန်အခြေအနေများတွင် ၉၅% မှ ၁၀၀% ခန့်၊ သွေးပြန်ကြော၏အောက်ဆီဂျင်ပြည့်နှက်မှုသည် ၇၅% ခန့်ရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သွေးလွှတ်ကြောဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်သည် ၉၄% အောက်သာရှိသည်။ အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုမလုံလောက်ပါ။ ၉၀% အောက်ကို hypoxemia ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သွေးတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုကြားကာလတန်ဖိုးများအပေါ် အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်သောကြောင့်၊ အားကစားနာရီများကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများမှရှာဖွေတွေ့ရှိသောသွေးတွင်းရှိအောက်စီဂျင်ပမာဏသည်လူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုထိထိရောက်ရောက်အကဲဖြတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ဥပမာ - အမြင့် ၃၀၀ မီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောတောင်တက်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်နှလုံးခုန်နှုန်းသည် ၁၀၀ ထက်မကျော်ပါက ၉၀% ထက်ပိုသောသွေးအောက်စီဂျင်ပမာဏသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ 80% -90% သည်ပျော့ပျောင်းသော hypoxia ဖြစ်သဖြင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချသင့်သည်။ ၇၀% မှ ၈၀% အတွင်းအသင့်အတင့်ရှိသော hypoxia ဖြစ်သည်၊ သင့်လျော်သောအောက်စီဂျင်ကိုရှူရှိုက်သင့်ပြီး၊ ၇၀% အောက်သည်ပြင်းထန်သော hypoxia ဖြစ်သဖြင့်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းသင့်ပြီးဆေးကုသမှုကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
လက်ရှိတွင်တစ် ဦး ကြွယ်ဝသောရှိပါတယ် အသွေးအောက်စီဂျင်ထောက်လှမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူဝတ်ဆင် devices များ စျေးကွက်တွင် Huawei၊ Xiaomi, Jiaming နှင့်စမတ်ကျသောဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည် MedOranger ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးစတင်ခဲ့ပါပြီ။ စမတ် ၀ တ်ဆင်နိုင်သော ၀ တ်စုံများအတွက်သွေးအောက်စီဂျင်ပြည့်နှက်ခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏နိယာမကိုနားလည်ပြီးနောက်သင်အမှန်တကယ်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကို ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
post အချိန်: Aprပြီ -15-2021
ကလေးသွေးဖိအား Monitor, နှလုံးသွေးတိုး Monitor, ဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးဖိအားစောင့်ကြည့်, အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသွေးဖိအား Monitor, စဉ်ဆက်မပြတ်သွေးပေါင်ချိန် Monitor, Icu လေဝင်လေထွက်စက်,